Nordea iyo Handelsbanken oo la ganaxaay iyo dhibaato ku soo fool leh xawaaladaha | Somaliska
Hay’ada la socodka dhaqaalaha (Finansinspektionen) ayaa maanta ganaaxday bankiyada Nordea iyo Handelsbanken, iyagoo lagu amray in ay bixiyaan lacag gaaraysa 85 milyan oo karoon. Bankiyada ayaa lagu eedeeyay in aysan si wanaagsan u xakamayn maalgalinta argagixisada. Bankiga Nordea ayaa qaasatan lagu tilmaamay arintiisa mid qatar ah oo waxaa la siiyay digniin.
Nordea ayay hay’adu sheegtay in aysan wax ka qaban cabashooyin la xiriira qaabka ay uga hortagayaan maalgainta argagixisada iyo isdaba marinta lacaga. Sanadkii 2013 ayaa Nordea la ganaaxay lacag gaaraysa 30 milyan oo karoon, iyadoo hada la ganaaxay 50 milyan. Inkastoo aysan cadayn arimaha qaaska ah ee lagu haysto Nordea ayay u badantahay in arintaan ay la xiriirto lacagaha xawaaladaha. Handelsbanken ayaa la ganaaxay 35 milyan.
Labada bank ayaa balan qaaday in ay wax ka qabanayaan eedeymaha loo soo jeediyay, iyadoo taasi ay u badantahay in ay xiri doonaan koontooyinka ay ka shakiyaan iyo qaasatan kuwa xawaaladaha. Arintaan ayaa dhibaato weyn u keeni karta xawaaladaha Soomaalida oo ay horay koontooyinkii uga xireen Swedbank.
Waa si wanaagsan mar hadii dahabshiil la xiraayo hehehe.